Company Fampidirana - Ningbo YH hydraulic milina Factory
Wire iray mirandrana Hoses
Wire roa mirandrana Hoses
Wire miolakolaka Hoses
Horonan sy ny voanjo
Matihanina mpanamboatra sy mpivarotra hydraulic Fittings, ferrules, hoses, milina sy ny Hose fivoriambe.
Ningbo YH hydraulic milina Factory dia natsangana tao amin'ny tanàna tsara tarehy, Ningbo, izay malaza amin'ny Beilun seranan-tsambo. YH hydraulic dia orinasa izay mamokatra manokana sy ny vatsy nandrandrana fingotra hoses, Hose Fittings, Hose ferrules, tsindry ambony Hose fivoriambe, crimping milina, sns Amin'ny maha-mpanamboatra, YH Manizingizina ny miezaka tsara tsara kokoa amin'ny ambany niaritra. Noho izany dia mifehy ny fitaovana izay
tokony novidina avy ofisialy vy orinasa sy ny fitsipika sy ny toetra tsara indrindra. Ary efa nentina nivoaka ny fampidirana rafitra famokarana izay mifototra amin'ny hifantoka tsara.
Amin'ny maha-mpivarotra, ny vokatra dia naondrana amin'izao tontolo izao, ary nivarotra ny firenena mahery 8 taona. Manana ekipa barotra-tsaina izay trandrahana tsena vaovao, fampandrosoana mety ho mpanjifa, famahana olana, ary ny fanompoana ny mpanjifa amin'ny didy tsara. Isika dia mifaninana sy sariaka cooperator ary ny tanjona dia ny fifanampiana soa sy maharitra tsara ny fiaraha-miasa.
Fanaraha-maso henjana kalitao; Mandaitra sy tena-ny fanohanana; Afa-po rehefa avy-varotra fanompoana
isika manondro ny henjana lafin-javatra efatra (fanaraha-maso ara-nofo fanafarana → → pamokarana fanaraha-maso ny sampan-draharahan'ny fanaraha-maso QC → departemanta pitaovana fanaraha-maso) sy ny rafitra fanaraha-maso ny kalitao mba ho azo antoka ny vokatra rehetra dia rava teo anatrehan'i lahateny. Ny dingana famokarana manana dingana valo: fiomanana ara-nofo; lathe fitaovana fanodinana; CNC milina fanodinana; burrs sy manala loto; fanitso voapetaka; farany fanamarinana kalitao sy ny habetsahany, nampirina entana sy hamonjy. Ao amin'ny mahazatra, dia mandamina maso
in-efatra nandritra ny famokarana ho an'ny filaminana iray. Products ny tsara halebeazana sy ny fitakiana avy amin'ny teny anglisy no hatao ao anaty dingana manaraka.
Indray mandeha isan-kerinandro, ny sampan-draharaha QC dia hanamarina CNC milina sy ny fitaovana hafa mba hahazoana antoka ny asa tsara.
Ny mahomby sy tena amin'ny fotoana fanohanana dia tena zava-dehibe ny mpanjifa. Ny mpanjifa mahazo izany amin'ny alalan'ny fitaovana an-tserasera Niady hevitra (Skype) izay lainga eo amin'ny farany ambany amin'ny tranonkala. Na mailaka ho anay akory va vokatra liana, fepetra, na ny zava-manahirana. Fa avy hatrany fifandraisana, ny antso tsy ampy mandritra ny 24 ora isan'andro. Koa isika hanangona ireo fanontaniana sy valiny nampiseho tamin'ny FAQ. Amin'ny maha-azo antoka mpamatsy, dia foana mamaha olana po sy ankasitrahany.
Fa na dia hentitra no hifehy toetra sy ny fomba matihanina tompointsika, tsy 100% vokatra no tonga lafatra. Noho izany dia manolotra fanompoana rehefa avy-varotra izay afaka miantoka ny kalitaon'ny vokatra sy ny feon'ny fieritreretany orinasa isika. Tsy misisika amin'ny fankatoavana ny tanjona telo eto ambany:
Ny famokarana filozofia:
→ Better toetra; Zava-baovao sy ny fiarovana ny tontolo iainana
Ny foto-kevitra ara-barotra:
→ fiaraha-mientana ifampizarana soa; Manome fahafaham-po ny fitakian'ny ny tsena; Manome ny tsara indrindra vokatra tsara sy ny fanompoana ny mpanjifa
Ny asa fanompoana-pinoany:
→ Overstep ny fanirianao; Mba ho azo antoka kokoa sy increment orinasa
Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo, Sina
© Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved. Tips , Featured Products , Sitemap , Mobile Site
Carbon Steel hydraulic Fittings , hydraulic Hose mety tsara , mimetatra Pex Sodina barahina Fittings , Hose Crimping Machine , Hydraulic Hose End Fittings, Carbon Steel hydraulic Hose Fittings, rehetra Products